Juventus Oo Si Rasmi Ah Wadahalo Ula Furtay Xiddig Ay Doonayeen Labada Manchester – Kooxda.com
Home 2017 October Italy, Wararka Maanta Juventus Oo Si Rasmi Ah Wadahalo Ula Furtay Xiddig Ay Doonayeen Labada Manchester
Juventus Oo Si Rasmi Ah Wadahalo Ula Furtay Xiddig Ay Doonayeen Labada Manchester
Kooxda Juventus ayaa lagu soo waramayaa in ay dib u bilowday wadahadaladii ay ku doonaysay xiddiga khadka dhexe uga ciyaara kooxda Monaco ee Fabinho kaas oo ay Man United sidoo kale doonayso saxiixiisa.
Xiddiga reer Brazil ayaa ka mid ah xiddigaha ugu fiican kooxda xilli kooxda reer Frnace go,aansatay in aany iibin xiddigan suuqii xagaaga kadib markii ay iibiyeen xiddigaha Bernardo Silva, Benjamin Mendy iyo Kylian Mbappé.
Si kasta ha ahaatee Fabinho ayaa la aaminsanyahay in uu yahay xiddiga kale ee ka bixi doona albaabka garoonka Stade Luis II xilli agaasimaha kooxda Juventus uu xiriir la sameeyay wakiilka xiddigan.
Sida laga soo xiganayo saxafiga Nicola Balice Kooxda bianconeri ayaa si Rasmi ah wadahadalo ula furtay kooxda Monaco iyaga oo doonaya in ay xiddigan kooxda ku xoojiyaan suuqa January.
Warkan ayaa ah mid u xun kooxaha kale ee xiisaha u qaba adeega xiddigan maadama ay damacsanaayeen in ay adeegiisa u dhaqaaqaan xagaaga dambe.
Monaco ayaa kooxda reer Italy u sheegtay in ay xiddigan ku heli karaan lacag dhan 50 milyan oo euro xilli ay Juventus ka war qabto xiisaha ay kooxaha Psg, Atletico Madrid iyo Kooxaha Manchester u qabaan xiddigan.